Ibhodi yezoKhenketho yase-Afrika yamkela iCosta Rica njengenkokeli esakhasayo kwezoKhenketho lweHlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » Ibhodi yezoKhenketho yase-Afrika yamkela iCosta Rica njengenkokeli esakhasayo kwezoKhenketho lweHlabathi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • News Sustainability • Iindaba zeWired Travel • I-WTN
Ngamazwe angama-52 e-Afrika njengamalungu oMbutho woKhenketho weHlabathi, eli lizwekazi ngowona mmandla ubalulekileyo kwi-UNWTO xa kuziwa kwiivoti.
UMongameli u-Alain St. Ange ufuna i-Afrika ukuba iphakame kwaye ivote kwi-UNWTO General Assembly ezayo eSpain emva kokuba iCosta Rica ithathe inyathelo elinesibindi lokuma ekukhanyeni kunye nobulungisa.
“Lusuku oluhle kwi-UNWTO yeBhodi yezoKhenketho yaseAfrika kunye noKhenketho lweHlabathi”
Umongameli weBhodi yezoKhenketho e-Afrika uAlain St. Ange uye waqhagamshelana noHloniphekileyo. UMphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica, uMhlonishwa. UMphathiswa uGustav Segura Costa Sancho kwaye wambulela ngombono wakhe kunye nokungenelela ekuceleni ivoti eyimfihlo kwi-UNWTO ezayo yokuqinisekisa ukuva ngokutyunjwa kukaNobhala-Jikelele.
U-Alain St. Ange, owayengumphathiswa wezoKhenketho waseSeychelles unamava akhe kunye nenkqubo yokhetho lwe-UNWTO kwaye wathi.
“Ndivuyisana noMphathiswa wezoKhenketho waseCosta Rica ngokumenzela kwakhe isiphakamiso sokubiza uvoto oluyimfihlo ngenkqubo yokuqinisekisa kwiNdibano kaWonke-wonke ezayo eMadrid.”
Olu luphuhliso oluhle kwaye ndiyayiqhwabela izandla iCosta Rica ngokunyuka. Iza kuqinisekisa ukuthembeka kwivoti ezayo kwaye ukuba ivula unyulo kwakhona iya kuqinisekisa inkqubo enobulungisa kunye nokhuphiswano kwesi sikhundla sibalulekileyo kukhenketho lwehlabathi.
Ndingathi lusuku oluhle kwi-UNWTO ye-ATB kunye noKhenketho lweHlabathi”.
Ukhenketho lishishini eliphambili elibaluleke kakhulu kuLuntu lweZizwe eziManyeneyo kwaye umzimba wethu we-UN kufuneka ubonakale uhambelana nesiqhelo esilindelekileyo ekukhetheni ubunkokeli bawo.
Isibongozo sam sesokuba iAfrika idlale indima ebalulekileyo kunyulo oluzayo nokuba amazwe athathe inxaxheba kwaye avote.
Sinamalungu angama-52 e-UNWTO, eyona pesenti inkulu kulo naliphi na ilizwekazi.
Nalu uluhlu lwamazwe angamalungu aseAfrika:
Okungakumbi kwiBhodi yoKhenketho yaseAfrika: www.africantourismism.com
Impembelelo yezoqoqosho ye-COVID-19 e-Afrika: ATB Webinar